America Inorangarira Kurwiswa Kwayo Muna 2001 - Voice of America
America iri kucherechedza kusvika Makore makumi maviri kubva zvayakarwiswa nevanopfurikidza mwero muna 2001.Marvellous Mhlanga-Nyahuye anoita hurukuro naVaFrank Chatonda.chizvarwa cheZimbabwe chaive muNew York pazuva iri.
America iri kucherechedza kusvika Makore makumi maviri kubva zvayakarwiswa nevanopfurikidza mwero muna 2001.Marvellous Mhlanga-Nyahuye anoita hurukuro naMuzvare Savanna Madamombe.chizvarwa cheZimbabwe chaive muNew York pazuva iri.
Mufundisi Rebecca Makayi Vokurudzira Vanhu Kuti Vanamate Apo America Irikucherechedza Kurwisa Kwayakaitwa Muna 2001
Mufundisi Rebecca Makayi vari kurudzira vanhu kuti vanamate panguva apo America irikucherechedza kurwisa kwayakaitwa muna Gunyana 2001, nevano pfurikidza mwero. Vhidhiyo ina Marvellous Mhlanga-Nyahuye.
America yocherechedza kusvika makore makumi maviri kubva zvayakarwiswa nevanopfurikidza mwero muna 2001.
America yocherechedza kusvika makore makumi maviri Kkubva zvayakarwiswa nevanopfurikidza mwero muna 2001. Vhidhiiyo ina Marvellous Mhlanga-Nyahuye weStudio7 achikurukura naDoctor Moses Rumano nezve nyaya iyi.
America Inorangarira Kurwiswa Kwayo Muna 2001